दैनिक अनलाइन | बैशाख ९, २०७७ मंगलबार | 0
काठमाडौँ । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना अहिले विश्वका २१० देशमा फैलिँदा १ लाख ७० हजार बढीको ज्यान गुमाइसकेका छन् । र, २४ लाख ८३ हजार बढी कोरोना संक्रमित भएका छन्।
तिब्र रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले पूरै विश्व आक्रान्त बनेको छ। अहिलेसम्म कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन नबनेका कारण त्यसको रोकथामका लागि विश्व लकडाउनको वाध्यकारी अवस्थामा छ । हवाई तथा स्थलमार्गहरु सबै ठप्प छन्।
यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा पनि ४१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। जसमध्ये ४ जना निको भएर घर फर्किएका छन् । ३७ जनाको उपचार जारी छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि नेपालमा लकडाउन शुरु भएको पनि आज २९ दिन पुगेको छ। नेपालमा गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन शुरु भएको हो। सरकारले लकडाउनको अवधि वैशाख १५ गतेसम्म लम्ब्याएको छ।
कोरोनाले हुँदा खाने वर्गालाई सास्ती
कोरोनाका कारण विश्व ठप्प हुँदा, हुँदा खाने, मध्यम र न्यून वर्गिय परिवारलाई हातमुख जोर्न पनि सास्ती भएको छ। जसलाई कोरोनाबाट भन्दा पनि खान नपाएर मरिने चिन्ता छ।
सरकारले लकडाउनको घोषणा त गर्यो । तर लकडाउनका कारण समस्यामा परेका मजदूर, विपन्न र विद्यार्थीका बारेमा केही सहयोग प्याकेज घोषणा गरेन । लकडाउनअघि एकान्तबासमा बस्नु पहिले जम्मा गरी राखेको मौज्दातमा खाद्यान्न क्रमशः सकिँदै गएको छ। लकडाउनले महंगी बढेको छ । किनेर खान सक्ने अवस्था नै छैन । तर दैनिक काम गरेर जीवन चलाउनुपर्ने कृषि मजदुर वा आम श्रमजीवी जनता खाद्यान्नको समस्याबाट छटपटाइरहेका छन् ।
सरकारको सहयोग गर्छु भन्ने आश्वासन समेत नपाएपछि धेरैलाई कोरोना भन्दा भोकको चिन्ताले सताएको छ। भोकै मर्ने चिन्ताले धेरै मानिस रातारात पैदलै हिँडेर घर फर्किएका छन्। कोरोना भन्दा भोक ठूलो भन्दै केही व्यक्ति पैदल हिँडेर घर पुगिसकेका छन् भने कोही बाटोमै अलपत्र परेका छन्।
दूधले बजार नपाउँदा किसान मर्कामा
लकडाउनका कारण दूध उत्पादनमा लागेका किसान संकटमा परेका छन् । देशका अधिकांश स्थानमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थले बजार पाएको छैन। एकातिर बजार छैन, अर्को तिर गाईभैँसीलाई खुवाउने दाना, चोकर र परालको समेत अभाव हुन थालेको छ।
लकडाउनका कारण दूध बिक्री नभएपछि कतै किसानले दूध पोखेका छन् भने कतै सित्तैमा वितरण गरिरहेका छन्। दूधले बजार नपाएपछि किसान घाटामा त छन् नै स्देशमै काम गर्ने सोच बनाएकाहरु पनि निराश बनेका छन्। अहिले बजारमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर १०० देखि १५० रुपैयाँसम्म छ। तर किसानको दूधले भने बजार पाउँदैन । सरकारले सामान्य रुपमा पनि दूधको मूल्य तथा बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
के गर्दैछ दूग्ध विकास बोर्ड ?
दुग्ध व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले दूग्ध विकास बोर्डको स्थापन भएको हो। नेपालमा दूधको उत्पादनमा वृद्धि गर्नु आवश्यकता पूर्ति गर्नु तथा राष्ट्रलाई नै दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनु नै यस बोर्डको उद्देश्य हो।
तर किसानले उत्पादन गरेको दुधले न त बजार नै पाएको छ । न त उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा दूध खान पाएका छन्। बजार नपाएर हजारौँ लिटर दूध सडक र बारीमा फाल्न बाध्य भइरहेका बेला दूग्ध विकास बोर्डको कर्तव्यमाथि प्रश्न उठेको छ। दूधको बजार व्यवस्थापन र मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने बोर्ड रहनुको औचित्य के ?
हरिया तरकारीसहितको कृषिजन्य उत्पादनले पनि पाएन् बजार
लकडाउनका कारण दूध किसान मात्रै हैन अन्य किसान पनि मर्कामा छन्। तरकारी, फलफूल, कुखुरा, अण्डा जस्ता उत्पादित सामाग्रीले बजार पाउन सकेको छैन्। दःख गरी गरी पालेका कुखुरा प्रतिकिलो ६० देखि १०० रुपैयाँमा बिक्री गर्न किसान बाध्य छन्। तर बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य भने उस्तै छ। अहिले बजारमा खसीको मासु प्रतिकिलो २ हजारसम्म बेच्ने गरेको पाइएको छ।
एकातिर किसान सस्तो मूल्यमा सामग्री बेच्न बाध्य छन् भने अर्को तिर उपभोक्ता महंगोमा खरिद गर्न बाध्य छन्। त्यसको फाइदा बीचमा रहेका बिचौलियाले उठाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सरकार मौन छ। न त किसानका सामान खरिद गर्न कुनै कदम उठाएको छ न त बिचौलियालाई कारबाही गर्न नै । कृषी प्रधान देशको अवस्था देख्दा नै उदेक लाग्दो छ।
कसरी हुन्छ कृषि क्रान्ति ?
सरकार कृषि क्रान्तिको पर्खाइमा छ। तर किसानको दुःख, कष्ट सुन्ने समय कसैलाई छैन्। कृषि क्रान्ति गर्छु भनेर चुनावमा कुर्लिने नेताहरु अहिले मौन छन्। सबैलाई आ–आफ्नै दूनो सोझ्याउन ठिक्क छ। तर अहिलेको महामारीको विशेष परिस्थितीमा पनि कुनै कदम उठाउन सकेका छैनन्।
यस्तो व्यवस्थाले लकडाउनमा किसानलाई रातह हैन समस्या थपिएको छ। यस्तो पाराले कसरी हुन्छ कषि क्रान्ति ? कसरी हुन्छ नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर । अनि यहि अवस्थामा कति दिन चल्छ नेपालमा लकडाउन।
फागुन २०, २०७६ मंगलबार डिल्ली मल्ल